”Ho an` ireo distrika ao Toamasina kosa, dia tsy mbola miditra an-tsekoly ireo mpianatra na manala fanadinana, hoy ihany ity filohan` ny CCO ity. Ho fiantohana ny zaza Malagasy moa no nandraisana izany fanapahan-kevitra izany. Saingy, toa tsy voaresaka mihitsy ny momba ireo mpampianatra na FRAM io na amin` ireo sekoly tsy miankina izay mandalo fahasahiranana amin’izao krizy entin’ny COVID-19 izao. Noho ny fiatoan’ny fampianarana dia miato torak’izay ihany koa ny fandoavan’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra ny karaman’ny FRAM. Toy izany ihany koa any amin` ireo sekoly tsy miankina, tsy mandoa saram-pampianarana ny ray aman-dreny ka tsy manan-ko raisina ireo mpampianatra. Efa maro ihany ireo antso avo amin ny tompon’andraikim-panjakana mba hijery azy ireo.